HVM: Nametra-pialana tsy ho Filoha Nasionalin'ny antoko i Rivo Rakotovao
vendredi, 27 juillet 2018 13:29
Nandritra ny fivoriana stratejika tao amin’ny Carlton androany, hiatrehana ny fifidianana no nanambaran’i Rivo Rakotovao ny fametraham-pialany tsy ho Filoha Nasionalin'ny antoko HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara).
Nanipika anefa ny tenany fa “tsy miala HVM fa miala tsy ho Filoha Nasionaly fotsiny ihany ho fanajana ny lalàna”. Tsy nambara teto ny ho filoha mandimby toerana azy hitantana ny antoko. Mametraka ny tohin’ny fanapahana amin’ny birao nasionaly ny tenany. Resaka mandeha ny hoe : ny mpanolontsaina manokan’ny filoham-pirenena Mohamed Haloa Rachidy no ho filoha mpisolotoerana mandram-pifidy izay ho filoha nasionaly vaovao.
Mikasika ireo mpikambana nisintaka tato ho ato dia nilaza i Rivo Rakotovao fa “tsy manangam-pahavalo ary tsy manam-pahavalo ny HVM fa safidy ny an'ireo izay niala noho ny tsy fitovian-kevitra politika sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fitantanana ny Firenena”.
Nanamafy ny fangatahany sy fanolorany an’i Hery Rajaonarimampianina hirotsaka ho fidiana indray ny antoko HVM.